Okokukhiqiza i-Tin Box Boxing, I-Wholesale for Packaging
Imikhiqizo ye-Cosmetic Tin Box
Ibhokisi elihle le-cosmetic tin liyinqwaba lokukhethwa kwezipho eziphakeme kakhulu kanye nama-promos. Lesi siqukathi se-tin esenziwe nge-cosmetic esingezwe ngenani siletha iphuzu lezindleko eziphakeme futhi sisebenza njengokwenyusa isikhathi eside. Ukubonakaliswa okuhle kwebhokisi lebhokisi elincane lobuhle obukhanyayo okwenziwe ukubonisa izinki ezibonakala obala futhi kuqeda kanye nezimpawu ezenziwe ngokwezifiso ezinjengokugqekeza kanye nezindawo ezikhethekile.
Isikwele se-Metal Tin Box esine-Lid Ecacile kanye neWindows yokupakisha
Amatshe Olondolozo Olinganiselwe Amatshe alahlekelwe Ngokupakishwa Kwezimonyo
AmaCustomer Metal Food Metain Containers we-Aocolor Packaging
Ibhokisi Lensimbi Elincane Elincane Elinezinto Ezilahlekile Zokupakishwa Kwama-Wallet
Izitsha Eziyindilinga Eziyinkimbinkimbi Ezincane Ezihlangene Nezilahleko Zokupakisha Kwezimonyo
Amabhokisi wesipho we-Metal Isipho Esinamandla Ongenalutho
I-Custom Rectangular Mint Tin Box Ye-Wallet Packaging Idea
Izingqimba Zensimbi Ezinkulu Ezihlanganayo Zokupakisha Izimonyo
Metal Round Small Tin Stain Containers For Ushukela Packaging
Amathini we-Square Empty Tin Ngokulahleka Okucacile Kokupakisha Kwezimonyo
Izithako ze-tin cosmetic ezine-Hinged Ezilahlekile Zokugcina Izimonyo
Kungani udinga iCosmetic Tin Box yokugcwalisa izimonyo?
Khetha i-Cosmetic Tin Box for Izimonyo Ukupakisha, Ezempilo kanye Nokubukeka kubaluleke kakhulu.
Ibhokisi lethini lezimonyo elihle yinqwaba yezinketho zezipho eziphakeme kakhulu kanye nama-promos. Lesi siqukathi se-tin esenziwe nge-cosmetic esingezwe ngenani siletha iphuzu lezindleko eziphakeme futhi sisebenza njengokwenyusa isikhathi eside. Ukubonakaliswa okuhle kwebhokisi lebhokisi elincane lobuhle obukhanyayo elenziwe ukuze kuboniswe ngoyinki obonakalayo futhi kuqeda kanye nezimpawu ezenziwe ngokwezifiso ezinjengokugqekeza kanye nezindawo ezikhethekile.
Amathini angenamthungo muhle njengamathini wezimonyo futhi nangamafutha ezindebe, amakhandlela, izimpuphu kanye nezinye izinto ezahlukahlukene ezomile futhi ezingenamanzi. Amathiseli ethu wesikulufa kanye nama-plug-ring ahlala evaliwe ephaketheni lakho.
Ukufakwa komkhiqizo we-tin kwamalambu amakhandlela kutholakala "ngezinyawo" ngaphansi ukuvikela amaphakethe (inketho eyenziwe ngokwezifiso). Amathini angadonswa amanzi amancane enza amakhandlela amahle okuhamba. Zifaka nezindawo ezilahliwe zemalebula ezinosayizi ojwayelekile. Ukufakwa kwe-tin kuvuselela unomphela ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi ephezulu. Enye into efakiwe ingafuna umjikelezo wempilo ende. Thola okuningi maqondana ngqo nendlela esikwazisa ngayo ukuqina.
Ithini elizimele lezimonyo ngokufanayo lenza ukwehluka okhethekile okuhlukahlukene kusuka kwesikulufo kuya kaphethiloli endandatho epulasitiki. Siphinde futhi sifake ama-plugs wensimbi, izigqoko, nokunye ukuvalwa okuhlukahlukene okungenziwa kusetshenziswe ngokuhlanganiswa komkhiqizo okuyinhlanganisela.
Obhaskiti bezipho zesipho kungenzeka ngeziqukathi zethu zokuhlobisa. Amakha, okhilimu, izithako kanye nezinto zokuhlobisa zingena ngokuphelele emithini yethu eyenziwe kahle. Amathani ethu amakhulu okuhlobisa ayesabeka ngamasethi wezipho, futhi angavuselelwa ukuze kube nendawo yokugcina. Izithako, kanye nenhlanganisela yobuhle, zingamahithi anikeza isipho samaholide. Iziqukathi ze-tin zokugqamisa zenza obhasikidi bamanje bezempilo nempilo kanye nokupakishwa komkhiqizo okhangayo. Isitsha sensimbi esikhangayo siba yingxenye yesipho futhi sisebenza njengesikhangiso esingapheli sezinto zokuqala.